အချစ်နဲ့ကစားနိုင်မယ့် ကစားနည်း (၃) မျိုး | Duwun
ဒီတိုင်းနေရတာ ပျင်းစရာကောင်းလာပြီ။ နည်းနည်းလောက် ကစားကြည့်....
တစ်ခါတစ်လေမှာ အချစ်က ငြီးငွေ့စရာကောင်းလာပြီလို့ထင်တယ်။ နှစ်ယောက်အတူ ရှိနေပေမဲ့ ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာမျိုးဟာ ချစ်သက်တမ်း ကြာမြင့်လွန်းတဲ့ စုံတွဲတွေဆီမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အချစ်နဲ့ကစားကြည့်မလား?
ချစ်သူကိုလှည့်ဖြားရတဲ့ ကစားနည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ ချစ်သူနဲ့အတူတူ ကစားရင်း အချိန်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် ကစားနည်းတွေကို ပြောမလို့ပါ။
သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲထိ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ငေးမောခဲ့တာ ဘယ်အချိန်တုန်းကလဲ? ဒီလိုမကြည့်ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ? ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ အချစ်သီချင်းလေးကိုဖွင့်ထားပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် ငေးကြည့်တဲ့ဂိမ်းကို ဆော့ကြည့်ပါ။ အရင်ဆုံး အကြည့်လွှဲတဲ့လူက အရှုံးပေါ့။
ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပုံပြောတမ်းကစားကြတာမျိုးလေ။ ပုံပြောပါဆိုရင် ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူအကြောင်းကို ဟာသလေးတွေနဲ့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ခုလည်းပဲ ဒီနည်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက် ရေးရအောင်ပေါ့။ စာကြောင်းရေ ၁၀ ကြောင်းနဲ့ ၁၀ မိနစ်အတွင်း အပြီးရေးပါတို့လိုမျိုး။ အချိန်စေ့သွားရင် အပြန်အလှန် လဲဖတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အကြောင်း ပါနေလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာကြီး။
အနမ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်မို့လား။ ပင့်ကူလူသားအနမ်း (ဇောက်ထိုးနမ်းတာ)၊ ပြင်သစ်အနမ်း (ချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့နမ်းတာ)၊ နတ်သမီးအနမ်း (နဖူးကိုနမ်းခြင်း) စတာတွေရှိတယ်။ သိသမျှ အနမ်းတွေအကြောင်း ချရေးပါလို့ သူ့ကိုပြောလိုက်။ သူဘယ်လောက်သိမလဲ? သိသလောက် ရေးထားသမျှ အနမ်းတွေအတိုင်း သူ့ကိုနမ်းပေးလိုက်ပါ။ ရင်ခုန်စရာအခိုက်အတန့်တွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုနိုင်မယ့်ဆောင်းပါး ---> အနမ်းတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်ပါရဲ့လား